China FPGA High-Speed ​​Ibhodi yeSekethe yeNdibano yokwenziwa kunye Factory |KAISHENG PCB
I-PCBFuture yimveliso yePCB kunye neNkampani yeNdibano yePCB.Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yokugqwesa okubalaseleyo, italente ekwinqanaba lehlabathi kunye nokuphumelela okutsha, iPCBFuture ihambe indlela ende ukuze ibe ngomnye wabayili bePCB abaphambili kunye nabavelisi namhlanje.Ugxininiso lwethu kumgangatho ophezulu kunye neenkqubo ezisebenzayo kwezoqoqosho ezidityaniswe nokungaguquguquki okungahambelaniyo kusenze ukuba sibe nokhetho oluqinileyo kulo lonke elaseTshayina.
Ukwaleka ngesinyithi:Electrolytic Nickel / Hard Gold kunye neGolide eKhethekileyo
Iileya:12 Umaleko wePCB
Ukwaleka kweMetal: Electrolytic Nickel / Hard Gold kunye neGolide eKhethekileyo Indlela yeMveliso: SMT + Iileya: 12 Layer PCB
Izinto ezisisiseko: FR-4 + RO4003C Isiqinisekiso: SGS, ISO, RoHS MOQ: Akukho MOQ
Iindidi zeSolder: I-Lead-Free (Ithobela i-RoHS) Iinkonzo zokumisa enye: Ukwenziwa kwePCB kunye nendibano yePCB yeTurnkey Uvavanyo: 100% AOI / X-ray / Uvavanyo olubonakalayo
Amagama angundoqo: Indibano yePCB, ukwenziwa kwePCB, iPCB yabemi, abavelisi bendibano yePCB, Iindleko zeNdibano yePCB, iNdibano yePCB etshiphu,IiNkampani zeNdibano zeBhodi yeSekethe eziprintiweyo
Kutheni ukhetha PCBFuture?
1. Isiqinisekiso samandla
I-workshop ye-SMT: sinemishini yokubeka kumazwe angaphandle kunye nezixhobo ezininzi zokuhlola optical, ezinokuvelisa amanqaku ezigidi ezi-4 ngosuku.Inkqubo nganye ixhotyiswe ngabasebenzi be-QC ukugcina umgangatho wemveliso.
Umgca wemveliso we-DIP: Kukho oomatshini ababini bokuthengisa amaza.Abasebenzi banobuchule bokuwelda izixhobo ezahlukeneyo zeplagi.
2. Ukuqinisekiswa komgangatho, ukusebenza kweendleko eziphezulu
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zinokuncamathisela iindawo ezimile kakuhle, BGA, QFN, 0201 imathiriyeli.Inokusetyenziswa kwakhona njengomzekelo wofakelo lwezandla kunye nokubekwa kwezinto ezininzi.Zombini iisampulu kunye neebhetshi ezinkulu nezincinci zinokuveliswa.
3. Amava atyebileyo kwi-SMT kunye ne-soldering yeemveliso ze-elektroniki, ukuhanjiswa okuzinzile
Ukubonelela ngeenkonzo eziqokelelweyo kumawaka eenkampani ze-electronics, ezibandakanya iinkonzo zokulungiswa kwetshiphu ye-SMT kwiintlobo ngeentlobo zezixhobo zemoto kunye neebhodi zokulawula ishishini.Iimveliso zithunyelwa eYurophu nase-United States Rhoqo, kwaye umgangatho unokuqinisekiswa ngabathengi abatsha nabadala.
Izinto ezisetyenziswayo ziya kuhanjiswa ngexesha phakathi kweentsuku ezi-3-5 emva kokugqitywa ngokuqhelekileyo, okanye zinokuhanjiswa ngosuku olufanayo.
4. Isakhono esinamandla sokugcinwa kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa
Injineli yokulondoloza inamava atyebileyo kwaye inokulungisa iimveliso eziphosakeleyo ezibangelwa ukufakwa kwe-welding ezahlukeneyo, kwaye sinokuqinisekisa izinga lokuxhamla kwibhodi yesekethe nganye.
Inkonzo yabathengi iya kuphendula nangaliphi na ixesha kwiiyure ze-24 kwaye isombulule iodolo yakho ngokukhawuleza.
Inkqubo yemveliso yePCBA:
Ukusetyenzwa kwepetshi ye-SMT
Ukuhlanganiswa kwemveliso egqityiweyo
Izinto eziluncedo kwibhodi yolawulo lwemizi-mveliso PCBA foundry material of PCBFuture:
Ixabiso eliphantsi lokuthenga.Sinabasebenzi abanobuchule bokuthenga abanobuchule kwizinto zombane kwaye banentsebenziswano yexesha elide kunye nomgangatho ophezulu kunye neendlela ezithembekileyo zokuthenga.Kukufezekisa iindleko ze-MOQ ze-zero.
Ukunciphisa iindleko zabasebenzi, sixhotyiswe ngokuthengwa kwe-elektroniki, iinjineli ze-elektroniki, izinto zombane kunye neengxenye ze-IQC, abathengi abafuni ukuqwalasela.
Ukuze kuncitshiswe iindleko zezinto eziphathekayo, sixhotyiswe ngezixhobo ezahlukeneyo zokuhlola i-elektroniki, abathengi akuyomfuneko ukuba baqwalasele.
Ukunciphisa kakhulu iindleko zonxibelelwano, abathengi akufuneki bakhuphe abathengisi bempahla ekrwada abaninzi, siya kubanceda bagqibezele inkonzo.
Uxanduva olucacileyo.Ukuba kukho ingxaki esemgangathweni, umthengi akufuneki ukuba agwebe ukuba yingxaki yempahla ekrwada okanye ingxaki yenkqubo yokuvelisa.Sinoxanduva ngokupheleleyo.
I-PCBFuture ngumvelisi we-PCBA OEM enokubonelela abathengi ngemveliso ye-PCB yobungcali, ukuthengwa kwezinto eziphathekayo, i-PCBA enye-stop imveliso ekhawulezayo kunye nezinye iinkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nabathengi.Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ubuza, zive ukhululekile ukuqhagamshelanasales@pcbfuture.com, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Ngaphambili: Iinkonzo zeNdibano zeFlex PCB
Okulandelayo: INdibano yeTurnkey epheleleyo
IBhodi ePhambili ye-PCB yeNdibano yaseTshayina